Usebheke isicoco somhlaba uMchunu oshaye uTishchenko eRussia - Impempe
Usebheke isicoco somhlaba uMchunu oshaye uTishchenko eRussia
March 27, 2021 Impempe.com
Cishe akuyona impi angazincoma ngayo, kodwa uThabiso Mchunu usebenze kusakhanya ebhekene no-Evgeny Tishchenko ukuze anqobe, azibeke ethubeni lokulwela isicoco somhlaba kwiWorld Boxing Council esisondweni se-cruiserweight.
Impi iphele sekubanjwe umoya njengoba uTishchenko evuke sekubhekwe ukuthi uMchunu uzidlela amahlanga wakhombisa ukuthi kungani awina indondo yegolide kuma-Olympics edlule.
UMchunu usenelungelo lokufaka inselelo kuJunior Makabu ongumpetha kulesi sigaba kwiWBC.
Emzuliswaneni wokuqala, uMchunu ulwe kahle eyihlasela le mbangi yakhe, ezama ukusondela ukuze akwazi ukuyithola ngesibhakela.
Nokho, ibikwazi ukubaleka, ivike angayitholi. Kowesibili ubesebuye ayilinde, efuna kube yiyo eza kuye, kodwa kwasho ukuthi iwuchakijana iyawabona amaqhinga akhe, Waze wagcina esebuyela ekuyiduduleni futhi.
Emzuliswaneni wesithathu, uTishchenko ubeseqala naye ukuhlokoloza, ezama indlela yokuvula uMchunu, kodwa wathola ukuthi le nkunzi yaseCato Ridge imlindele ukuthi akwenze lokho, kwangasebenza.
Ngomzuliswano wesihlanu, uTishchenko ubesezama ukubuya ngoba cishe ikhona lakhe bese limtshelile ukuthi ulandela ngemuva ngamaphuzu.
Kowesithupha, uRock ubesethelwe ngezibonkolo, wayibhambabula ngesibhakela le mbangi kwacaca ukuthi iphelelwa amandla. Bese kucaca ukuthi ukuphela kwendlela le nsizwa yaseRussia engawina ngayo wukuthi imqumbe phansi uMchunu.
Umzuliwswano wesishiyagalombili uthande ukwesinda kumfokaMacingwane njengoba eye esefuna ukuqeda impi, kanti uTishchenko uyakubona lokho, wasebenzisa ithuba ukuphonsa izibhakela ezimbalwa zamthola engalindele uMchunu.
Emizuliswaneni yokugcina, uTishchenko ubesebonakala ukuthi akalona isaka lempuphu leli obekucatshwangwa ukuthi uyilo ngasekuqaleni.
UTishchenko ukhombisile ukuthi izibhakela zikaMchunu abeziphonsa ngasekuqaleni kwempi azizange zimkhubaze njengoba ebuye ngamabfla ngasekugcineni, umphumela sewulele kwisinqumo samajaji.
Previous Previous post: USirino uyibona isendleleni ebheke ekubutheni zonke izicoco iSundowns
Next Next post: Izinguquko kweleBafana elizodlala neSudan